Isugeynta: 16 + Waxqabadyada Bilaashka ah ee Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Kuwa aan aqoon, falalka Photoshop Iyagu maahan wax ka badan tillaabooyin taxane ah oo lagu qaaday barnaamijka kuwaas oo la xafiday si ay u awoodaan inay fuliyaan markasta oo aan rabno. Aad ayey faa'iido ugu leeyihiin noocyada shaqooyinka qaarkood ee aan u qabanno si joogto ah, maadaama ay tahay habka otomaatiga looga dhigo qayb ka mid ah geeddi-socodka oo markaa loo dedejiyo wax soo saarkeeda.
Gundhigyada si ballaaran loo isticmaalo, tusaale ahaan, waa kuwa xafidaya ku darista saxiixayaga ama sumadeynta sawirka. Sidan oo kale, halkii aad ka dooran lahayd qalabka qoraalka, qor, hagaaji cabirkiisa, dooro midab oo aad ku kala duwanaan karto mugdiga ... Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad hal guji ku sameysaa ficilka. Laakiin waxaa jira ficillo badan oo badan (oo waxtar leh) halkaas. Qoraalkan, waxaan kuugu keenaynaa wax ka badan 16 ficil oo bilaash ah oo loogu talagalay Photoshop.
1 Waxqabadyada Bilaashka ah
1.1 Sida loogu rakibo daaqadaha
1.2 Sida loogu rakibo mac
Waxqabadyada Bilaashka ah
Sida loogu rakibo daaqadaha
Marka hore, soo dejiso ficilada aad rabto.
Tag Kombiyuutarkayga iyo, bar-tilmaameedka, ku qor C: \_ Faylasha Barnaamijka \_ Adobe \_ Adobe Photoshop CS5 \_ Waxqabadyada Waa tan meesha ay tahay inaad ku jiidato ficilada aad hadda soo dejisay. Ku beddel qeybta ku qoran Adobe Photoshop CS5 nooca barnaamijka aad rakibtay (CS6, CS4, CS3…).
Haddii Photoshop kuu furan yahay, xir oo dib u fur. Xariif ah!
Sida loogu rakibo mac
Tag astaanta Raadiyaha, oo ku jirta doc-kaaga. Guji Codsiyada, fur falka Adobe, Adobe Photoshop CS5 iyo galka Waxqabadka. Halkaas ku jiid saamiyadaada cusub ee aad soo dejisay.
Shaah xumbo casaan
Waxqabadka Baadhitaanka Riyada
Iftiinka Qoraxda & Axada (Qorrax soo bax iyo qorax dhac)
33 Talaabooyin Kaladuwan
12 Filim Saamaynta
Saamaynta Instagram 2
Saamaynta Instagram 3
5 Ficillo dib loogu hagaajinayo maqaarka
Generator otomaatiga ah ee Polaroid
Falalka aan la hadlin
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » 16 + Falal Bilaash ah oo loogu talagalay Photoshop
Ku jawaab pedro32
Ku jawaab cristian rojas
Ku jawaab Angelasalame